I-Jaybird ivula ii-headsets ezingenazingcingo ezinyani ze-Ultra ezi-XT | IPhone iindaba
I-Jaybird isungula i-XT Run XT ii-headphone ezingenazingcingo ze-Ultra ezingenamandla
UJaybird yinkampani eyenza ii-headphone eziyilwe ngabadlali bekhwalithi ngaphezu kokuthelekisa, sivavanye enye yenkampani kwaye basishiyele incasa emilonyeni yethu. Nangona kunjalo, olu hlobo lweJaybird luhlobo lokuhlaziywa kwezinto esele zikho, ewe, zitshiphu kancinci kunalezo bezinikwe kude kube ngoku.
Makhe sijonge ezi ntloko zentloko zilungiselelwe iimbaleki, iJaybird RUN XT ekwayinyani engenantambo, into engaqhelekanga kwii-headphone zezi mpawu njengoko sinokubona ngokujonga nje ukhuphiswano.
Ezi ntloko baya kusinika iiyure ezili-12 zokuzimela, ezine zazo ngee-headphone ezinokuphindaphindwa kathathu ukuba sizilayisha ngokuqhubekekayo kwibhokisi yazo. Ibhokisi ayikho ncinci kakhulu, kodwa inemilo embhoxo eya kuyenza ukuba ikhululeke nakweyiphi na ipokotho okanye ubhaka, ngaphandle kokuba incinci ngokwaneleyo ukuba ingalahleka ngokulula. Kananjalo akufuneki siphulukane nee-headphone kuba banesicelo ekuthiwa yi-Find My Earbuds ezakusivumela ukuba sizifumane nanini na, ukuba olu hlobo lweeNtloko zeNtambo ezingenantambo ziyinyama kwaye zisibiza imali encinci.
Njengezinye iimveliso zenkampani, siya kuba nokulinganisa ngokwesiko kwimidlalo esiyenzayo kunye nolwahlulo olwahlukeneyo oluya kusivumela ukuba silungelelanise ii-headphone zifezekise. Njengakwezinye iimeko ezi headphone ziyamelana namanzi nothuli, Ukongeza koku baya kubiza nge-179,99 ye-euro xa besungulwa eSpainOkwangoku ziyafumaneka kumazwe afana ne-United States of America, ukuba unomdla wokwazi kwaye ufuna ukungenisa kweli. Enye indlela yee-AirPods kwabo banomdla kwezemidlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Jaybird isungula i-XT Run XT ii-headphone ezingenazingcingo ze-Ultra ezingenamandla
UTim Cook uthetha ngexabiso le-iPhones: "Ndicinga ukuba yinto"
ICorning yonyusa inzuzo ngaphandle kokuThengiswa kwe-iPhone esezantsi